शिव श्रेष्ठ भन्छन्, 'मेरो चलचित्र रिलिजसँगै सिनेजगत्‌का धेरै काम पुनः सुरु हुन्छन्
कोरोनाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको चलचित्र हल १० पुसदेखि सञ्चालनमा आए । तर, चलचित्र हल सञ्चालनमा आएको तीन हप्ता पुग्नै लाग्दा कुनै पनि नयाँ चलचित्र रिलिज भएनन् ।
१ माघदेखि भने नयाँ चलचित्र हलमा लाग्दै छ । अभिनेता शिव श्रेष्ठले निर्माण गरेको चलचित्र 'एउटा यस्तो प्रेम कहानी' १ माघदेखि रिलिज हुने तयारीमा छ ।
कोरोनाका कारण हलमा दर्शक नआइरहेको समयमा निर्माताहरू चलचित्र रिलिज गर्न डराइरहेका छन् । तर, शिवले भने चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले चलचित्र रिलिजको आँट गरेकाे बताएका छन् । दीपेश सापकोटाको निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा शिवसँगै प्रियङ्का कार्की, वर्षा राउत, संजोग कोइराला, आयुष्मान देशराज जोशी, शक्ति श्रेष्ठ र कविता मानन्धरको मुख्य भूमिका छ । 'मल्टीस्टारर' चलचित्र भएका कारण पनि यस चलचित्रले हलमा केही चहलपहल बढाउन सक्ने धेरैको अनुमान छ । चलचित्र रिलिज गर्न तयार अभिनेता तथा निर्माता शिव श्रेष्ठसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश:
यस बेला अन्य निर्माताहरू चलचित्र रिलिज गर्न डराइरहेका छन् । तपाईं किन तम्सिनुभएकाे ?
सत्य हाे, समय अलि फरक छ । तर, आश्चर्य मान्नुपर्ने त्यस्तो पनि छैन । चलचित्र हेर्न दर्शक नआउलान् कि भन्ने डर हाम्रो टिममा पनि थियो । तर, यो चलचित्रको प्रदर्शनले धेरै क्षेत्रको ढोका खोल्छ भन्ने लाग्यो । यसरी सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने देखेर हामीले प्रदर्शन गर्ने हिम्मत गरेका हौँ ।
कोरोनासँग दर्शक डराइरहेका छन् । लगानी डुब्ला कि भन्ने डर लागेकाे छैन ?
जोखिम त छ । तर, हामी मनोरञ्जनको क्षेत्रबाट यहाँसम्म आएका हौँ । म आफैँ विगत ४० वर्षदेखि काम गर्दै आएकाे छु । जोखिमभन्दा पनि चलचित्र क्षेत्रका लागि मेरो कर्तव्य सम्झेर रिलिज गर्न लागेको हुँ ।
सरकारले हल खोल्न अनुमति दिएको धेरै भएकाे छैन । काेराेनाकाे त्रास अझै सकिएकाे पनि छैन । यस्ताे बेला चलचित्र रिलिज गर्न अलिक हतार गरेकोजस्तो लाग्दैन ?
यो समय मैले दर्शकका लागि नै चलचित्र ल्याएको हुँ । मलाई शिव श्रेष्ठ भनेर यो स्थान दिनुभएको नै दर्शकले हो । मैले दर्शकलाई पनि मनोरञ्जन दिनुपर्छ । कोरोनाका कारण घरमा थुनिएर बस्नुभएका दर्शकका लागि नयाँ चलचित्र दिएको छु । मलाई विश्वास छ कि, मेरो चलचित्र हेर्न दर्शक हलसम्म आउनुहुनेछ ।
चलचित्र रिलिजपछि चलचित्र क्षेत्र चलायमान होला त ?
मलाई लाग्छ, चलचित्र क्षेत्र पक्कै चलायमान हुनेछ । किनभने यस चलचित्रको प्रदर्शनसँगै बन्द भएका, रोकिएर रहेका चलचित्रका कामहरू पुनः थालनी हुनेछन् । चलचित्र प्रदर्शन भएपछि चुप लागेर बस्नु हुन्न भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नेछ । साथै, चलचित्र क्षेत्रका प्राविधिक कलाकारहरूले काम पाउने वातावरण बन्नेछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७, १२:२८:००